Faka i-LinkedIn Company Landela Inkinobho | Martech Zone
Faka Inkinobho Yokulandela Inkampani Ye-LinkedIn
NgoLwesibili, ngoFebhuwari 28, i-2012 NgeSonto, uJanuwari 15, 2017 Douglas Karr
Ngilithanda kakhulu iqiniso lokuthi i-LinkedIn iba yipulatifomu yezokuxhumana yomphakathi esezingeni eliphezulu. Amaklayenti nabathengisi bebhizinisi (B2B) nabathengisi, ukulandela izinkampani emphakathini ku-LinkedIn kungakunika ulwazi oluhle ngemikhiqizo yabo, izinsizakalo kanye nolwazi lwemboni. Uma uthola ithuba, kufanele ulande nezinhlelo zokusebenza zeselula ze-LinkedIn - ukulungiswa okuhle kwe-algorithm yabo yokukhomba izindaba eziphezulu nezihloko ngaphakathi kwenethiwekhi yebhizinisi lakho kugqamile.
I-LinkedIn manje inikeza inkinobho yokuthi amalungu alandele ibhizinisi lakho:
Qalisa nje ukuthayipha igama lakho lenkampani kumdali wabo wezinkinobho bese uyikhetha kokudonsela phansi okuzenzakalelayo. Uma ungekho lapho, ungahle udinge ukudala iphrofayili yenkampani… kunconywe kakhulu!
Ungabona inkinobho isebenza ku i-ejensi yezokuxhumana indawo. Qiniseka ukuthi uyasilandela!
Tags: LinkedIninkampani exhumanisiweunjiniyela we-linkedinisixhumanisi silandelalinkin yokulandela inkinobhoisixhumanisi kumathiphu
Ukubekwa phambili kwenombolo 1 kwama-CMO ngo-2012
I-plugin ye-Authorship ye-WordPress